Warshadda Dhalinta Shiinaha Hub iyo soosaarayaasha | Shallow Yong
Qaab-dhismeedku wuxuu ka kooban yahay kursiga qaadista, flange, giraanta gudaha, qafis, curis wax lagu beddelo, dareeraha ABS, giraanta qalabka soo gelista, boodhka xoogga sare, qaybaha wax lagu xidho iyo qaybaha kale.
Unugga dhalista xudunta waxaa loo sameeyay iyadoo lagu saleynayo xiriirka kubbadda xagalka leh iyo xiriirka duubista. Waxay qaadataa laba qaybood oo saa'id ah guud ahaan. Waxay leedahay faa'iidooyinka waxqabadka wanaagsan ee shirkii, ka tagida hagaajinta nadiifinta, miisaanka fudud, qaabdhismeedka is haysta, awoodda culeyska weyn, xiritaanka xirashada waxaa lagu buuxin karaa dufan horay u sii socda, shaabadda xargaha dibadda waa la dhaafay oo dayactirkuna waa lacag la'aan. Waxaa si weyn loogu isticmaalay gawaarida Sidoo kale waxaa jira isbeddel ah in tartiib tartiib loo ballaariyo dalabyada gawaarida xamuulka.
Shandong qianyong soo dejinta iyo dhoofinta ganacsiga Co., Ltd. waa soo saare xirfadle ah oo saa'idka xarunta baabuurta. Marka lagu daro bixinta alaabta ceeriin, shirkaddu waxay leedahay layn wax soo saar oo u gaar ah, khadka daaweynta kuleylka otomaatiga ah, diyaaradda, wareegga banaanka, waddada, wareegga gudaha, superfinishing iyo qalabka kale; inta badan soo saartaa xarunta wheel wheel, wheel xiisad, mishiinka isteerinka, hawo qaboojiye, UC dibadda, mashiinada beeraha, kubad jeexdin qoto dheer, aan caadi ahayn iyo tilmaamaha kale ee saa'idka. Shirkaddu waxay leedahay tikniyoolajiyad wax soo saar wanaagsan, qalab casri ah, macnaheeda oo dhammaystiran iyo tayada wax soo saarka oo xasilloon oo lagu kalsoonaan karo. Wax soo saarka ayaa asal ahaan loo iibiyaa Yurub, Ameerika, Koonfur-bari Aasiya, Bariga Dhexe iyo dalal kale iyo gobollo.
Hore: Deep Groove Ball saarista
Xiga: Dhalista Roller goobeed